Ikhaya eliBanzi laBucala♥ Ikhitshi Elihle LG Yadi!!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSam
Relax kwikhaya eliphangaleleyo nelicocekileyo leRanch kwindawo ezolileyo kakhulu. Zonke iindwendwe kunye namaqela amkelekile.
Uya kuba nokufikelela kuyo yonke indlu kunye nangaphambili nangasemva kwendlu. Oku kubandakanya ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye nendawo yokutyela, zombini icandelo kunye nesofa kwigumbi lokuhlala elijikeleze iTV ehlakaniphile, imidlalo yebhodi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokulala elikhulu elinomabonakude kunye nebhafu enkulu, indlela yokuqhuba iimoto ezi-2 kunye negumbi elikhulu lokuhlambela. Ngasemva kwendlu enemigangatho emibini kunye nomgodi womlilo!
Igaraji yeemoto ezi-2 nayo iyafumaneka kwiindwendwe. Ukugcina amaxabiso afikelelekayo kuzo zonke iisayizi zokubhukisha, i-Basement yokuphuma enegumbi lokulala elongezelelweyo, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela elinetafile ye-pool ifumaneka ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo yokubhukisha kunye neendwendwe ezi-6 okanye ngaphezulu. Amaqela amancinci kunama-6 angacela ukufikelela kwi-basement kumamkeli xa ugcina.
I-Winnebago yidolophana eyi-15 imizuzu ngaphandle kwe-Rockford, kunye ne-right off umzila we-20. Le yindawo yokuhlala ezolileyo yabanini-zindlu, kunye namakhaya osapho agcinwe kakuhle kunye neengca.
Simise oku ukuba ibe likhaya lakho labucala, kwaye sinokufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho ukuba ufuna nantoni na kum okanye endibambene naye!